မိုးကုတ်ရေပူကျောင်းဆရာတော် လူဝတ်လဲ ခံရ…. – Real News
မိုးကုတ်ရေပူကျောင်းဆရာတော် လူဝတ်လဲ ခံရ….
မိုးကုတ်ရေပူကျောင်းဆရာတော် လူဝတ်လဲ ခံရ
မိုးကုတ်ရေပူကျောင်းဆရာတော် ဦးဣန္ဒကဟာ မနေ့ မတ်လ ၁၁ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက လူဝတ်လဲ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဣန္ဒကကို မိုးကုတ်က ဆန္ဒပြမှုတွေ ဦးဆောင်တယ်ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေကတည်းက ၅၀၅(ခ) နဲ့ အမှုဖွင့်ထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် မနေ့ကမှ လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဣန္ဒကရဲ့ တပည့်ဆရာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ ဦးရေဝတက “ဆရာတော်နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်က ကိုစိုးဌေးကို မိုးကုတ်သပိတ်တွေစထွက်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ရက်နေ့ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သပိတ်ဦးဆောင်တယ်ဆိုပြီး ၅၀၅(ခ)နဲ့ စွဲထားတာ။ မနေ့က ညနေ ၅နာရီလောက်မှာတော့ ကျောင်းကို လာဖမ်းတာ။ ဆရာတော်နဲ့အတူ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်အပါအဝင် ကိုရင်တွေရော ၅ပါး အဖမ်းခံရတာ။
ဦးဇင်းနဲ့ ကိုရင်တွေကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပေမယ့် ဆရာတော့်ကိုတော့ အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုပြီး ပြန်လွှတ်မပေးတော့တာ။ ဦးစိုးဌေးကတော့ အဖမ်းမခံလိုက်ရဘူး” လို့ VOM ကို မိန့်ပါတယ်။မနေ့က မိုးကုတ်ဆန္ဒပြပွဲကို မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ ဖြိုခွဲပြီးနောက် ရေပူဆရာတော်အပါအဝင် လူဦးရေ ၄၀ နီးပါး ဖမ်းခံခဲ့ရပြီး လတ်တလော မိုးကုတ်မြို့ တောင်ကချင်အချုပ်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးဣန္ဒကကို သံဃနာယက မပါဘဲ လူဝတ်လဲ ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ ဆရာတော်ရဲ့ တပည့်ဆရာတော် ဦးရေဝတက မိန့်ပါတယ်။ဆရာတော် ဦးဣန္ဒကဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကလည်း ရေပူကျောင်းကို တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်စဉ်မှာ တရားမဝင်ကျောက်မျက်တူးဖော်မှု ပုဒ်မ ၄၁ (က) နဲ့ (ခ)၊ သစ်တောဥပဒေ ၄၂ (ခ)၊ သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှု ပုဒ်မ ၂၉၅ တွေနဲ့ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့မှာ လူဝတ်လဲဖမ်းဆီးခံရပြီး အိုးဘိုထောင်ထဲကနေ တနှစ်နီးပါး အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
မိုးကုတျရပေူကြောငျးဆရာတျော လူဝတျလဲ ခံရ
မိုးကုတျရပေူကြောငျးဆရာတျော ဦးဣန်ဒကဟာ မနေ့ မတျလ ၁၁ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက လူဝတျလဲ ဖမျးဆီးခံလိုကျရတယျလို့ သိရပါတယျ။ဆရာတျောဦးဣန်ဒကကို မိုးကုတျက ဆန်ဒပွမှုတှေ ဦးဆောငျတယျဆိုပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးတှကေတညျးက ၅၀၅(ခ) နဲ့ အမှုဖှငျ့ထားတာ ဖွဈပမေယျ့ မနကေ့မှ လာရောကျဖမျးဆီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဦးဣန်ဒကရဲ့ တပညျ့ဆရာတျောတပါးဖွဈတဲ့ ဦးရဝေတက “ဆရာတျောနဲ့ ၈၈မြိုးဆကျက ကိုစိုးဌေးကို မိုးကုတျသပိတျတှစေထှကျတဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၇ရကျနပွေီ့း သိပျမကွာခငျမှာပဲ သပိတျဦးဆောငျတယျဆိုပွီး ၅၀၅(ခ)နဲ့ စှဲထားတာ။ မနကေ့ ညနေ ၅နာရီလောကျမှာတော့ ကြောငျးကို လာဖမျးတာ။ ဆရာတျောနဲ့အတူ ဦးဇငျးကိုယျတိုငျအပါအဝငျ ကိုရငျတှရေော ၅ပါး အဖမျးခံရတာ။
ဦးဇငျးနဲ့ ကိုရငျတှကေို ပွနျလှတျလိုကျပမေယျ့ ဆရာတေျာ့ကိုတော့ အမှုဖှငျ့ထားတယျဆိုပွီး ပွနျလှတျမပေးတော့တာ။ ဦးစိုးဌေးကတော့ အဖမျးမခံလိုကျရဘူး” လို့ VOM ကို မိနျ့ပါတယျ။မနကေ့ မိုးကုတျဆန်ဒပွပှဲကို မကျြရညျယိုဗုံးတှနေဲ့ ဖွိုခှဲပွီးနောကျ ရပေူဆရာတျောအပါအဝငျ လူဦးရေ ၄၀ နီးပါး ဖမျးခံခဲ့ရပွီး လတျတလော မိုးကုတျမွို့ တောငျကခငျြအခြုပျထောငျမှာ ထိနျးသိမျးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဆရာတျော ဦးဣန်ဒကကို သံဃနာယက မပါဘဲ လူဝတျလဲ ဖမျးဆီးခဲ့တာလို့ ဆရာတျောရဲ့ တပညျ့ဆရာတျော ဦးရဝေတက မိနျ့ပါတယျ။ဆရာတျော ဦးဣန်ဒကဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈကလညျး ရပေူကြောငျးကို တိုးခြဲ့ဆောကျလုပျစဉျမှာ တရားမဝငျကြောကျမကျြတူးဖျောမှု ပုဒျမ ၄၁ (က) နဲ့ (ခ)၊ သဈတောဥပဒေ ၄၂ (ခ)၊ သာသနာညှိုးနှမျးစမှေု ပုဒျမ ၂၉၅ တှနေဲ့ ဇှနျလ ၉ရကျနမှေ့ာ လူဝတျလဲဖမျးဆီးခံရပွီး အိုးဘိုထောငျထဲကနေ တနှဈနီးပါး အမှုရငျဆိုငျခဲ့ရပါသေးတယျ။
မြစ်ကြီးနားမှာတဲ့ ကြိုးကြာတွေ အဲ့လိုပျံဝဲရင် နမိတ်ကောင်းတယ် တဲ့ အမြန်ကောင်းပါတော့ မြန်မာပြည်
သက်တော်၁၀၀ နှစ်ရှိပါပြီယခုအချိန်ထိဆွမ်းခံတုန်းပါ ဆရာတော်ရဲ့သပိတ်တော်ကိုသက်တော်၅ဝရှိ